Maitiro ekugadzirisa mhinduro dzakanaka dzeApple Watch | IPhone nhau
Maitiro ekugadzirisa mhinduro dzakanaka paApple Watch
Dzimwe nguva unogamuchira mameseji kana maemail ayo nekuda kwechimwe chikonzero iwe hauna iyo iPhone iripedyo uye unofanirwa kupindura uchishandisa iyo Apple Watch. Imwe yesarudzo ndeye shandisa mhinduro dzekutanga dzauinadzo pakurinda. Zvimwe zvakanaka, asi kana iwe ukazvisarudzira neako masitayera, iwe uchagara uchitaridzika zvirinani neako anopindirana.
Kune echinyakare Apple zvinoshandiswa seMamessage kana Tsamba izvo zvinokutendera iwe kugadzirisa uye nekuchinja iwo default mhinduro, uye chokwadi ndechekuti chinoongwa. Unogona kuchinja "Ndine hurombo, handikwanise kutaura izvozvi" kuenda "Ndiri kubatikana Shur, tichataura gare gare," semuenzaniso.
Apple Watch chishandiso icho nekuda kwehukuru hwechiso chayo chisingakwanise kugadzirisa keyboard. Asi zvakadaro Iwe unogona kupindura kumeseji, maemail, Teregiramu, Twitters, uye zvimwe uchishandisa kuraira, maemoniki, kunyora kwemaoko, kana mhinduro dzakafanotemerwa.
Mamwe ekuzvarwa Apple maapplication akadai seMessage neMail, anotendera iwe kuti ugadzirise idzi default mhinduro uye gadzira yako wega. Zvinoenderana nemutauriri wako, mhinduro nemaitiro ako kana mutauro unogara uri nani pane mhinduro "dzakakomba" kubva kuApple.
Maitiro ekugadzirisa mhinduro dzakangwara muMameseji kana Tsamba paApple Watch
Vhura iyo Apple Watch app pane iyo iPhone
Mupumburu pasi uye vawane mameseji kana Mail
Tinya pane Default Mhinduro
Pano unogona kugadzirisa zviripo, zvidzime, kana kuwedzera zvitsva
Kana iwe ukabata edita, unogona kuchinja marongero emhinduro nekubatisisa pasi icon yemitsara mitatu kurudyi, uye nekufambisa mhinduro kumusoro kana pasi.
Kubva pano wakasununguka kwazvo kupindura zvaunoda. Unogona kusiya zvakasarudzika kuti ushandise kubasa, uye wobva wawedzera zvimwe zvako wozvishandisa nemhuri uye neshamwari. Ini ndinowanzo shandisa kana ini ndichida kupindura chimwe chinhu uye ini handina nhare yangu padhuze, ndinayo yekuchaja semuenzaniso. Uye Zviripachena kune avo vane Apple Watch LTE.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzirisa mhinduro dzakanaka paApple Watch
Podcast 11x22: Iyo Coronavirus Inouya kuTekinoroji